ဒီတစ်ပတ်မှာ အိမ်တွင်းပဲ မအောင်းနဲ့တော့ ယောင်းတို့.. ပျော်စရာပွဲတွေချည်းပဲ! - For her Myanmar
ဒီတစ်ပတ်မှာ အိမ်တွင်းပဲ မအောင်းနဲ့တော့ ယောင်းတို့.. ပျော်စရာပွဲတွေချည်းပဲ!
ဒီပွဲတွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဒီပိတ်ရက်မှာ ပျင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး
အပတ်စဉ် ပိတ်ရက်မှာ ယောင်းတို့အတွက် သွားစရာပွဲလေးတွေကို ရေးပေးနေကျအတိုင်း ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ဘယ်တွေသွားပြီး ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ မောင်းထုလိုက်ပါပြီနော်။
Event : Kirin Night with LUCID
Date : ၁၅.၂.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့)
TGIF အတွက် ဘယ်သွားရမလဲဖြစ်နေလား ? မပူပါနဲ့ The Maze Club မှာ ပြုလုပ်မယ့် Intermission XL’s Birthday Show ရှိပါတယ်။ ည (၁၀) နာရီကနေ မနက် (၄) နာရီထိမို့လို့ တစ်ပတ်လုံးပင်ပန်းထားသမျှ ပျောက်သွားအောင် ညလုံးပေါက်ကဲချင်သူ ယောင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။
The Maze Club ရဲ့ တည်နေရာကတော့ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေမှာပါ။
အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီလင့်ခ်လေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်
Event : အညာပွဲဈေး
Date : ၁၆.၂.၂၀၁၉ ၊ ၁၇.၂.၂၀၁၉
ဦးကျော်ကျော်လုံချည်မှ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အညာပွဲဈေး ကို ဖေဖော်ဝါရီ (၁၆) ရက်နေ့နဲ့ (၁၇) ရက်နေ့တွေမှာ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ပြုလုပ်သွားမှာပါ။
မြန်မာ့အကနဲ့ စောင်းသံတွေကို ခံစားကြည့်ရှုရင်း အကြော်မျိုးစုံ၊ စစ်ကိုင်းခိုတောင်မုန့်တီ၊ အညာထမင်းသုပ်၊ မန္တလေးနို့ထမင်း၊ ရွှေရင်အေး၊ အုန်းမွှေးလုံး၊ အညာထန်းရည်နဲ့ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံကို ၁၅၀၀၀ကျပ်တည်းနဲ့ ဘူဖေးစားနိုင်မယ့် ပွဲလေးဖြစ်တာကြောင့် အစားတစ်လိုင်းယောင်းတို့ပျော်ပျော်ပါးပါးသွားနိုင်မှာပါ။
ဒီပွဲလေးကိုတော့ ညနေ (၅) နာရီမှ စတင်ပြီး ဦးဝိစာရလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ မရမ်းခြံကျောင်းဘေးမှာရှိတဲ့ UKK ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Event : Yangon Cosmetics Night Market
Date : ၁၂.၂.၂၀၁၉ မှ ၁၇.၂.၂၀၁၉ ထိ
အလှအပစိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် အစားလည်းစားရင်း တွေလည်းဝယ်ရင်း လုပ်နိုင်မယ့် ပွဲလေးတစ်ပွဲကို Beauty Diary က ကျင်းပပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပထမဆုံး Cosmetic Night Market ကို Beauty Diary နဲ့ တူတူဆင်နွှဲဖို့ဆိုတော့ Beauty Diary ဆရာစံဆိုင်ခွဲကိုသာ သွားပါနော်။ ပွဲချိန်လေးကတော့ ညနေ (၅)နာရီ ကနေ ည (၉)နာရီထိ ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီလင့်ခ်ထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်
Event : FHM Singles’ Night
Date : ၁၄.၂.၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့)
Valentines’ Day မှာ သွားစရာမရှိဖြစ်နေသူတွေကတော့ နှစ်ခါမစဉ်းစားဘဲ ယောင်းတို့ရဲ့ For Her Myanmar က ကျင်းပတဲ့ Singles’ Night ပွဲကို လာခဲ့လိုက်ပါ။
ဝင်ကြေးအနေနဲ့ကတော့ တစ်ကိုယ်တော်ဆိုရင် ၁၅၀၀၀ကျပ်ဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါခေါ်လာရင်တော့ နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ ၂၅၀၀၀ကျပ်ပါနော်။ For Her Club မန်ဘာဝင်ယောင်းလေးတွေအတွက်တော့ အထူးစပါယ်ရှယ်လျှော့ဈေး ၁၀၀၀၀ကျပ်ပါနော်။
ဓာတ်ဖမ်းလို့ကောင်းတဲ့ Sedona Hotel D’cuisine Restaurant ရဲ့အပြင်ဘက် E-Deck မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ရုံးချိန်ကျောင်းချိန်လွတ်တဲ့အချိန် ည (၇)နာရီ ကနေ (၉)နာရီအထိဆိုတော့ ယောင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ Drink တွေ Free Flow သောက်ခွင့်ရှိတဲ့အပြင် Sedona Hotel မှာ အခမဲ့ညစာစားခွင့်တွေကိုပါ ကံစမ်းပေးဦးမှာဆိုတော့ အခုပဲ လက်မှတ်ဝယ်ထားလိုက်ပါတော့ ယောင်းရေ…
အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီလင့်ခ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းအတွက် ပိတ်ရက်မှာ သွားစရာတွေ တော်တော်စုံနေလောက်ပြီပေါ့။ နောက်အပတ်တွေမှာလဲ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘာတွေစားပြီး ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားဦးမှာမို့လို့ စောင့်ဖတ်ပေးကြနော်။
ဒီပှဲတှသှေားမယျဆိုရငျတော့ဖွငျ့ ဒီပိတျရကျမှာ ပငျြးစရာအကွောငျးမရှိတော့ပါဘူး
အပတျစဉျ ပိတျရကျမှာ ယောငျးတို့အတှကျ သှားစရာပှဲလေးတှကေို ရေးပေးနကေအြတိုငျး ဒီတဈပတျမှာလညျး ဘယျတှသှေားပွီး ဘာတှလေုပျလို့ရတယျဆိုတာ မောငျးထုလိုကျပါပွီနျော။
Date : ၁၅.၂.၂၀၁၉ (သောကွာနေ့)
TGIF အတှကျ ဘယျသှားရမလဲဖွဈနလေား ? မပူပါနဲ့ The Maze Club မှာ ပွုလုပျမယျ့ Intermission XL’s Birthday Show ရှိပါတယျ။ ည (၁၀) နာရီကနေ မနကျ (၄) နာရီထိမို့လို့ တဈပတျလုံးပငျပနျးထားသမြှ ပြောကျသှားအောငျ ညလုံးပေါကျကဲခငျြသူ ယောငျးတို့အတှကျ အဆငျပွမှောပါ။
The Maze Club ရဲ့ တညျနရောကတော့ အရှမွေ့ငျးပွိုငျကှငျးလမျး၊ တာမှမှောပါ။
အသေးစိတျကိုတော့ဒီလငျ့ချ မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ
Event : အညာပှဲဈေး
ဦးကြျောကြျောလုံခညျြမှ ကွီးမှူးကငျြးပတဲ့ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ အညာပှဲဈေး ကို ဖဖေျောဝါရီ (၁၆) ရကျနနေဲ့ (၁၇) ရကျနတှေ့မှော နှဈရကျဆကျတိုကျ ပွုလုပျသှားမှာပါ။
မွနျမာ့အကနဲ့ စောငျးသံတှကေို ခံစားကွညျ့ရှုရငျး အကွျောမြိုးစုံ၊ စဈကိုငျးခိုတောငျမုနျ့တီ၊ အညာထမငျးသုပျ၊ မန်တလေးနို့ထမငျး၊ ရှရေငျအေး၊ အုနျးမှေးလုံး၊ အညာထနျးရညျနဲ့ မွနျမာမုနျ့မြိုးစုံကို ၁၅၀၀၀ကပျြတညျးနဲ့ ဘူဖေးစားနိုငျမယျ့ ပှဲလေးဖွဈတာကွောငျ့ အစားတဈလိုငျးယောငျးတို့ပြျောပြျောပါးပါးသှားနိုငျမှာပါ။
ဒီပှဲလေးကိုတော့ ညနေ (၅) နာရီမှ စတငျပွီး ဦးဝိစာရလမျး၊ ကမာရှတျမွို့နယျ၊ မရမျးခွံကြောငျးဘေးမှာရှိတဲ့ UKK ရနျကုနျဆိုငျခှဲမှာ ကငျြးပပွုလုပျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Date : ၁၂.၂.၂၀၁၉ မှ ၁၇.၂.၂၀၁၉ ထိ
အလှအပစိတျဝငျစားတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ အစားလညျးစားရငျး တှလေညျးဝယျရငျး လုပျနိုငျမယျ့ ပှဲလေးတဈပှဲကို Beauty Diary က ကငျြးပပွုလုပျထားပါတယျ။ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ပထမဆုံး Cosmetic Night Market ကို Beauty Diary နဲ့ တူတူဆငျနှဲဖို့ဆိုတော့ Beauty Diary ဆရာစံဆိုငျခှဲကိုသာ သှားပါနျော။ ပှဲခြိနျလေးကတော့ ညနေ (၅)နာရီ ကနေ ည (၉)နာရီထိ ဖွဈပါတယျ။
အသေးစိတျကိုတော့ ဒီလင့်ခ်မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ
Date : ၁၄.၂.၂၀၁၉ (ကွာသပတေးနေ့)
Valentines’ Day မှာ သှားစရာမရှိဖွဈနသေူတှကေတော့ နှဈခါမစဉျးစားဘဲ ယောငျးတို့ရဲ့ For Her Myanmar က ကငျြးပတဲ့ Singles’ Night ပှဲကို လာခဲ့လိုကျပါ။
ဝငျကွေးအနနေဲ့ကတော့ တဈကိုယျတျောဆိုရငျ ၁၅၀၀၀ကပျြဖွဈပွီး သူငယျခငျြးတဈယောကျပါချေါလာရငျတော့ နှဈယောကျပေါငျးမှ ၂၅၀၀၀ကပျြပါနျော။ For Her Club မနျဘာဝငျယောငျးလေးတှအေတှကျတော့ အထူးစပါယျရှယျလြှော့ဈေး ၁၀၀၀၀ကပျြပါနျော။
ဓာတျဖမျးလို့ကောငျးတဲ့ Sedona Hotel D’cuisine Restaurant ရဲ့အပွငျဘကျ E-Deck မှာ ပွုလုပျသှားမှာဖွဈတဲ့အပွငျ ရုံးခြိနျကြောငျးခြိနျလှတျတဲ့အခြိနျ ည (၇)နာရီ ကနေ (၉)နာရီအထိဆိုတော့ ယောငျးတို့အတှကျ အဆငျပွမှောပါ။ Drink တှေ Free Flow သောကျခှငျ့ရှိတဲ့အပွငျ Sedona Hotel မှာ အခမဲ့ညစာစားခှငျ့တှကေိုပါ ကံစမျးပေးဦးမှာဆိုတော့ အခုပဲ လကျမှတျဝယျထားလိုကျပါတော့ ယောငျးရေ…
အသေးစိတျကိုတော့ ဒီလင့်ခ် မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးအတှကျ ပိတျရကျမှာ သှားစရာတှေ တျောတျောစုံနလေောကျပွီပေါ့။ နောကျအပတျတှမှောလဲ ဘယျနရောတှမှော ဘာတှစေားပွီး ဘာတှလေုပျလို့ရလဲဆိုတာ ပွောပွပေးသှားဦးမှာမို့လို့ စောငျ့ဖတျပေးကွနျော။
Tags: Event, hangout, weekends
Stella February 13, 2019